JINGHPAW KASA: ဗမာအစိုးရ မြောင်ပိုင်းတိုင်မှူး၏ သတိပေးစားကို ကေအိုင်အိုမှ ကန့်ကွက်
ဗမာအစိုးရ မြောင်ပိုင်းတိုင်မှူး၏ သတိပေးစားကို ကေအိုင်အိုမှ ကန့်ကွက်
မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းထွန်းနောင်၏ သတိပေးစာ
Labels: N Dau Laika
Myen hpyen dapadap awn daju mung Thein Sein wa shi nan re ngu maram lu ai.Minn Awng laing gaw ningtau dap awn daju she re.Awng Minn wa tsun ai mungmasa jahta ga ngu ai ga sadi gaw anhte hpe majan kaba baw na matu jai lang ladat shaw ai hpyen zailadat langai mi re.Thein Sein asuya gaw hpang jahtum nsa hti wa ai majaw lahpye lashan wa ai masa re Annau ni myit dating ga.Yang gung shwe dagung gawk ngu hpara ntsa kaw mang sha langda6sa dung sai.
December 25, 2012 at 5:36 AM
Jet ai munghpawm(Federal)hpe myit mada n mai na masa nga ai.Hpa majaw nga yang jet ai munghpawm(Federal) gaw gap mayu ai rai yang ya na zawn aten masat nna sadi jaw na lam n nga ai.Thein Sein asuyaashamu shamawt nga ai mungmasa masing gaw 2008 ning Constitution ka lajang ai ten kaw nna jahkrat tawn sai masing re.Ja ja ninghkap ra na re.
December 25, 2012 at 6:05 AM
Htun Htun Naung hku nna KIO/KIA hpe laika sa sadi jaw ai lam gaw, KIAamyit hpe gasup yu ai ladat sha re, Myendap ni KIA hpe majan ndip lu ai majaw sha re, KIO/KIA hku nna ti-nang galaw ra ai hpe dingyang ngam ngam galaw mat ai gaw manu ai.
Tsawra ai KIO..,KIA..,Dai Htun Htun Naung ngu ai, Myen du hpe Leng Leng tsun dat mu le...,Nang Tsun n-na sha..,Anhte hkan ya ai rai yang.., Hkrit ai rai yang ..Mungkan ga anhte n-sa shangai na ga ai ngu...,
ဟေး ကောင်းလိုက်တာ နင်တို့ ဆုတ်ချင်ဆုတ်တော့ မဆုတ်ရင်တော့ သေပီပဲ .....
ရိက္ခါ ပို့ လမ်း ကြောင်း ကို နောက် ယှက် တဲ့ ကောင် တွှေအပြတ် ရှင်း တာ ကောင်း တယ်။ ထပ် နောက် ယှ က် ရင် အ ကုန် ရှင်း ။ဘာ မ ဆို အော် သူခိုး ကလူ ဟစ် ဆို တဲ့ ဟာ အ ပြတ် တိုက် တာ အ ဖြေ ဘဲ။
ဘာ မှ သ တိ ပေး မ နေ နဲ့ ငြိမ်း ချမ်း ရေး မလို လား တဲ့ ကောင် တွေကို အ ပြက် ရှ င်း မှ အေး မယ်။
Kiaတွေ အပြောင် ရှင်းပြီး ဘုရား သခင် နိုင် ငံပို့ လိုက်ပါ ဒါမှ ကချင်ပြည်နယ် အေးချမ်း သွားမယ်။
ကချင် လောက် တော့ မ မွဲ သေး ပါ ဘူး ။ဗျာ။တိုက် ခွ င့် ရလို့ က တော့ နင် တို့ မျိုး ကန်း ပြီ ။လ ဒ ။ လေ ကြ ကျယ် မနေ နဲ့ ။၁၂၀ စာ မိ တော့ မယ်။
December 25, 2012 at 9:37 PM
သွေး ထွက် အောင် မှန် တယ် သူ ငယ် ချင်း။
သွေးထွက်တာမကဘူး အစတောင်ရှာမရမှာမို့လို့ မှာစရာရှိတာမှာထားလိုက်ကြ ဗမာ့သားကောင်း အသေခံတွေ မင်းတို့အတွက်ရင်လေးပေးတယ် အဲလေး မင်းတို့ ချီးစားဖူးတယ်ဆိုတော့လည်း မတတ်နိင်တော့ဘူး....ပြောရင်တော့ ကချင်တွေက ဘာဖြစ်သလဲ ညာဖြစ်သလဲနဲ့ ၁၂၀နဲ့တဲ့ မရှက်ကြဘူးလား...အခြောက်တွေ......
ပြောတော့ ရိက်ခါပို့သလဲနဲ့ ကချင်တွေက မင်းတို့ ဦးနှောက်လောက်တော့ အေးဆေးဘဲ...မင်းတို့မို့လို့ မရှက်ဘဲနဲ့ ပြေဘဲနိင်တယ် လက်နက်သယ်ရင် သယ်တယ်ပေါ့ ဘာဖြစ်လဲ....မင်းတို့ဦးနှောက်လောက်နဲ့ လာမယှဉ်နဲ့ အံတိုနေပြီ........
ဗမာတွေသိပ် မ ဟောင် နဲ့ အခုတ လော ရွှေတိဂုံစေတီ ပေါ်မှာ လဒ ခြောက်ကောင် လာနားသွားတယ် ဆိုတာသိလား မသိရင် သတင်းမှာကြည့်လိုက် မင်းတို မသာပေါ် ဖို့ နမိတ်ပဲ လဒ တွေ စားဖို့ လာစောင့်နေပြီစောက်ကျင့် ရုတ်တဲ့ ဗမာလူမျိုးကွ ဂုဏ်ယူလိုက် မင်းတို့အရမ်း ချစ်တဲ့ အစိုးရနဲ့လည်း သွေးမခွဲပေးပါဘူး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချစ်ပြီး ဖင် ဆက်ခံကြ မေလိုးမ ဗမာတွေ ကုလားပြည်ပြေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကုလားဆိုတာမမေ့နဲ့
Tun Tun Naung gaw namdum kaw lang na maisau hkan hpai ya ai madang sha re majaw shi hpe chyarang kaw nbang ga. Gawk ngu ntsa kaw dung nga ai langda6hpe atsawm yu mu. Shawng na langda gaw Thein Sein rai nna, Min Aung Hlaing, Aung Min..... ni rai ma ai. Hpang jahtum kaw pra npra rai shingna lang nna tsap nga ai gaw kadai rai kun? KIA hpe lam yen na matu matsun jaw ai gaw Tun Tun Naung nrai. Mangsha langda ni she rai nga ma ai. Mangsha langda ni e, dai kaw la nga mu. Myen hpyenla mang ni Erawaddy hka nu hku yawng yu wa na mara ai. Nanhte amyu hpe nanhte nan sha kau ai kaw ginchyum dat na. Dai shani jang mungkan gaw ngwi pyaw simsa wa na.
December 26, 2012 at 4:16 AM
မင်းတို့ဗမာတွေအားလုံးကချင်မြေကထွက်သွားကြကချင်တွေကြီးပဲနေရင်ဘာပျက်သနာမှမရှိဘူးအမျိုးယုတ်ဗမာတွေသွားကြထွက်သွားကြစောက်ရှက်မရှိတဲ့နယ်ချဲဗမာတွေကချင်ပြည်ရဲ့ချမ်းသာသုခဖျက်စီးတဲ့ဗမာအမျိုးယုတ်တွေထွက်သွားကြကချင်ပြည်လည်းနေသေးတယ်ကချင်ကိုလည်းသတ်ချင်တယ်သရေပေါ်နားသရေသားစားတဲ့ဗမာအမျိုးယုတ်တွေစောက်ရှက်မရှိတဲ့လူမျိုးတွေငါတို့မြေကခုချက်ခြင်းထွက်သွားကြပါget out all myanmar from our land
ရွေတိဂုံစေတီ မှာဒလ ၆ကောင်နားတယ်ဆိုတာ ကချင်မျိုးနွယ်စု ၆ မျိုးကို ဖော်ဆောင်တယ်။ ဆိုလိုတာကမြန်မာနိုင်ကို ကချင်လူမျိုးတွေကအ ပိုင်စားမယ်။ကချင်လူမျိုးတွေ က ဗမာအတွက်တော့အသားစားတဲ့ဒလတွေပေါ့။ ကချင်ကလေးနန်းတက်မှအေး| ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားက တကယ်ဖြစ်လာမှတိုင်းပြည်အေး ချမ်းမှာပါ။
ရန်ကုန် မန္တလေးမှာ နဲ့မြို့ ကြီးတွေမှာနေတဲ့
သူတို့ ကချင်တွေက ဗမာတွေကိုမောင်း
ကချင် မြေလို့ ဘယ်သူ ပြောတာလဲ။ နှစ်ပေါင်း ထောင် ချီတဲ့ မြန်မာမင်း တွေရဲ့ သြဇာ သက် ရောက် ခဲ့ တဲ့ နယ်မြေ တွေမို့ တရုပ်နိုင် ငံ မဖြစ်နေတာပေါ့ တယ်ဟုန်ဒေသ ဟာ တရုပ်နိုင်ငံထဲက ရှမ်းကချင်သေဘဲ မြန်မာမင်းတွေရဲ့ သြဇာ မသက်ရောက်ခဲ့ ရင် တရုပ်နိုင်ငံ တယ်ဟုန်ဒေသ ဖြစ်နေမှာ ပေါ့ သမိုင်းကြောင်း အဆက်ဆက် ကာကွယ်ခဲ့ လို့ မြန်မာ နိုင်ငံငံရယ်လို့ တွဲရှိနေတာပေါ့ ။ ယူနန်စစ်သူကြီး သုံးကြိမ်တိုင် တိုက်မနိုင် လို့ ကိုယ်ဟာကိုယ် အဆုံး စီရင် ခဲ့ တဲ့ ဗလမင်းထင် ရဲ့ ကောင်းတုံ ခံတပ်ဆို တာ ဗန်းမော်နားလေးမှာ ဘဲ ။ သမိုင်းလေ့ လာ ကြဦး ရွှေကချင်တွေရေ။ ကချင်ပြည်နယ် ရယ်လို့ english က သတ်မှတ်သွား တာပါ။ ဘာ လဲ ငါတို့ ဆီက ထွက် သွား ဟုတ်လား တောင် ပေါ် နေပိန်းဥစား တွေက ဧည့်သည်က အိမ်ျရှင် လုပ်ချင် တာလား တောင်ပေါ်ပြန်တက်နေကြ သမိုင်း လေ့လာဦး သမိုင်းမသိ စာမရှိတွေ ရဲ့။
X'mas hta shangai wa sai mayesu gaw....tsatan aq shangun ma (myen..hpen hpung)ni hpe sharin shaga na mu ai..asak galu ....oakland
လဒ ဆို တာ ကချင် တွေရဲ့ မျိုး နွယ်စု ဆို တာ
ခုမှသိတယ် ဟား ဟား ဟား
သူ တို့ ကိုယ်တိုင် လဒမျိုး ရိုး လို့ ဝန်ခံ လိုက်ပြီ
အ နောက် လှဲ့ လိုက် ခြောက် သလား လို့ပြ ပေး လိုက် မယ်။
ထောက် ခံ တယ် ဗျာ။
December 26, 2012 at 6:05 PM
မိ ဘ ကို ဆဲ ဒါ လောက် ပါ ဘဲ။လ င်း တတွေ။
သ နား လို့ပြော ပြ တာ နား တ ဖက် ပေါက်တွေ ။နားလည် မှု့ မ ရှိ တဲ့လ ဒ ရှင်း လိုက် မှ ကောင်း မယ်။
လေ ဘဲ အောင် တယ်။လဒ ရယ်။
ချူပ် နေ ရ အုံး မယ် နော။ယောက် ဖ ရေ။
သံဃာမီး ရှို့ အရူး ချီးပန်း လျောက်ပြော မနေပါနဲ့ သမိုင်းဟာ သမိုင်းပါ
ကချင် ဆိုတာ တောင် ပေါ် နေတာပါ ဗန်းမော် အ နော်ရထာမင်း တည်ခဲ့တြဲှ့မို့ မိုးညှင်း မိုး ကောင်း ဆိုတာ မြန်မာမင်း သစ္စာခံ ရီမ်းစော်ပွါး တွေ လူဦးရေ ကြည့် လိုက်ဦး ကချင် နဲ့ ရှမ်း ဘယ်သူ ပိုများလဲ သမိုင်းကြောင်း ကြည့်ရင် ကချင်င ခွဲထွက်ချင်င် မှု လုံးဝ လက်ခံစရာ အကြောင်း မရှိ ပြတ်ပြတ် သားသား တိုက် ဖြေ ရှင်း ရမှာ ပါ။
100% ထောက်ခံ ပါတယ် သမိုင်းကြောင်း အစစ်မို့ လက်ခံ ပါတယ်။
December 26, 2012 at 6:31 PM
ဦးဂွမ်မော် လား အေလိုး ။ဦးဂွမ်မော် ရှိလား ငါလိုး ဆ်ုတဲ့ နား တစ်ပေါက် တွေ ပါ။
ရှမ်း ပြည် က နေ ဒ ဓါး မြ တိုက် လာ ပြီး တောင် ဒီက ဘာ မ သိ တဲ့ လင်း တ တွေ စည်း ရုံး သ မိုင်းရေး ပြီး လေ ကြယ် ဒမြ အဖွဲ့ ကို ရှင်း ပစ် မှ နား ငြီး သက် သာ ပြည် နယ် အေး ချမ်း မယ်.....
ကြောင် ချီး ဆ လွ တ် ကမ် က စကား တာ ဖြောင့် ဖြောင့် မ ပြော တတ် တာ ကန့် ကွ က် စာ အ တိုင် အ တော တော့ တတ် တယ် ဗျ။မ ပေါ့ နဲ့။
ကြောက် လို့ ကြောင် ချီး ထွ က် တာ ပါ။အ တော် ဆုံး ကို အ ဖွဲ့ ခေါင်း ဆောင် တင် ထား တာ။
ဗမာကသာenglishကျွန်လုံးလုံးဖြစ်ဒါတို့ကချင်ကတောင်တန်းအက်ဥပဒေနဲ့ကိုယ့်မြေကိုယ်အုပ်ချုပ်ပြီးနေခဲဒါlong long ago ကလိုရာစွဲးသမိုင်းကြီးတွေလာမပြောနဲ့နာသွားမယ်
စာမရှိ က သမိုင်း ဘယ်သိ မှာလဲ။
english လာမှ စာရှိတော့ ကိုယ့်အ ကြောင်း တောင် ကိုယ်မှတ်တမ်း မရှိ တဲ့ လူမျိုးတွေ ဆို တာ နားလည်ကြစမ်းပါ။
marau bum said...
ဗမာဗိုလ် ထွန်းထွန်းနောင်တွက် မနက်ဖန် ဆိုတာ မရှိစေရဘူး ။။။။ ခုချက်ခြင်း ငရဲ ပြည် ပို့မယ်။။။
ဒီစစ်က သေချာပေါက် ကချင်နိုင်မှာ။
ဒီမှာ ဘယ်လောက်ပဲဟောင် ကောင်းကောင်း ဟိုတောဘက်မှာ တော့ ဗမာ တပ်ကြီးတရိပ်ရိပ် တက်ရင်းနဲ့ တမြေ့မြေ့ သေကုန် ပြီ ဟူသ တတ်
လူ ရှိုင်း သာ သာ အဆင့် ရှိ တဲ့ ကောင် တွေ။
ကုန် နေ တာ kia တွေ စု ဆောင်း ဆွဲ ရတာ ကို အလျင် မမှီဘူး ဖြစ် နေ တယ်။ တပ်မဟာ ၂ က ပြော နေ တယ် ကျွန် တော် တ်ု့ အခြေ အနေ မကေကာင်း ဘူး တဲ့ ။ ရန်ကုန်ကချင် မန္တလေးကချင် စင်ကာပူ ကချင် တွေ လာ သေကူကြပါဦးတဲ့။
ဘယ်မြို့ ထဲ ကချင်မှ သေနပ် ကိုင်ပြီး အသေမခံကြ ဘူး တောသား ကချင် တွေ ဘဲ သေနေတာ။ မန္တလေး ရန်ကုန် ကချင် စုဆောင်းရေး ခေါ် ကြည့်ပါ ရဲစခန်း ဖုန်းခေါ်မှာ။ မယုံရင် စမ်း ကြည့်ပါ။
ရွှေလီနေ ကိုယ်ပိုင်စီပွါး ဗိုလ်ချုပ် တွေ အတွက် ဒမြ တိုက် ရင်း အသေခံကြ။
ဘယ်မြို့ ထဲ ကချင် မှ သေနပ် ကိုင်ပြီး အသေမခံကြ ဘူး တောသား ကချင် တွေ ဘဲ သေနေတာ။ မန္တလေး ရန်ကုန် ကချင် စုဆောင်းရေး ခေါ် ကြည့်ပါ ရဲစခန်း ဖုန်းခေါ်မှာ။ မယုံရင် စမ်း ကြည့်ပါ။
ယိုး ဒယား လဲ ဘယ်နိုင်ငံ ကြီး ကျွန် မှ မ ဖြစ် ခဲ့ ဘူး ကချင်နဲ့ အတူတူ ဘဲ ဗမာ ကျွန်ဘဲ ဖြစ် ခဲ့ တာ။
December 27, 2012 at 6:33 AM
ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုသတ်တဲ့ လူမဆန် တဲ့ကောင်တွေကများ Kia ကိုအပြတ်ရှင်းမယ်တဲ့ ရယ်ချင်တယ် ခုချိန်ထိကချင်ပြည်မှာ ဗမာကောင်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာ စုံစမ်းလိုက်အုံး သောင်းဂဏန်း ရှိနေပြီနော် မှတ်လည်းထားအုံး မင်းတို့စစ်တပ်က မထုတ်ပြန်ဘူးမလား ဟား ဟား
December 27, 2012 at 7:40 AM
ဗမာကောင် တွေသေတာ သောင်းဂဏ္ဍန်းရှိနေပြီနော် ဟား ဟား
ကချင်တွေသေတာ (kia) သိန်းဂဏန်း
ရှိပြီ ဟေ့ကောင်တွေ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း
မြန်မာ တပ်မတော် က သေတာ သောင်း ဂဏန်း
ဆို KIA က သန်းနဲ့ ချီ သေပြီ လို့ ယူဆ ရ မှာ ပါ ပဲ
အမြောက် တချက် ပစ်တိုင်း KIA အယောက် 50
လောက်သေပါ တယ် ။ မယုံရင် လိုင်ဇာ ဆေးရုံ မှာ
အလောင်း လူနာ တွေ ထားလို့ မလောက်ဘူး။
ဒီ တိုင်ဆိုရင် ကချင် တွေ တော့ မလွယ်ဘူး
padang yesu said...
WP myu sha an nau ni hpe shaning 60 ram du hkra simyam kaba jaw nga ai,masha myit nmyit,gale galau MASU hkrai MASU ai myen asuya ndai hpe ninghkap shamyit kau ga.shingrai yang she WP annau ni lam shagu hta sim sa nga mu nga mai na re.gwi gwi daw dan shaga na ten rai sai.
December 27, 2012 at 6:25 PM
ဂွမ် မော် လည်း သူ့ ပြည် သူ့ စစ် တွေ ပစ် လို့ နှစ် ပိုင်း သေ ပြီ တဲ့ ယောက် ဖ ရေ။
tun tun naung naw n-na jang sawa si nan si na ra ai ----sa wa si na myen ni----nang hte hpe prat tup ma tsing da ai yaw--- ya gaw na an hteasai gaw KIA/ KIO hte jing hpaw myu sha niamatu sha re--- masha ni hpa mi tsun tsun an htea--pang dung kaw n-mai mat ai yaw--myit gata gaw jun tawn da ga---pang dung n-nga jang masha ni tsun ai maga de lawm mat ai re--- dai ma jaw --- pang dung langai sha hte hkawm sa ai ni rai ga ngu sadi jaw mayu ai --- tsaw ra ai wun pawng myu sha ni -----
ကချင်စစ်တပ်ကြီးက ကချင်လူမျိုးကို မကာကွယ်ပဲ ဘာလို့ ကချင်လူမျိုးတွေ နေ့တိုင်း အေးအေးချမ်းချမ်းတဲ့ သွားလာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်အောင် အစိုးရက စေတနာနဲ့ တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ ရထားလမ်းကို ဘာလို့ မိုင်းထောင်ပြီး ဖျက်စီးရတာလဲ ။ တံတားတွေ ဘာလို့ ဖျက်စီးရတာလဲ ။ဗျူဟာအရဆိုရင်လည်း ပြည်သူတွေကို မငှဲ့ပဲ မိမိတို့ သူပုန်တပ် မှောင်ခိုကောင်းစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ဓါးမြကောင်းစွာ တိုက်နိုင်ဖို့ ကိုပဲ ဦးစားပေးရတာလဲ ။ အလင်းဝင်ပါ ။ ကချင် ဗမာ ရှမ်း မခွဲခြားပါနဲ့ ငါတို့ ပြည်ထောင်စု စည်းစည်းလုံးလုံးရှိပါစေ ။အစိုးရက ခွဲခြားအုပ်ချူပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကချင်ပြည်နုယ်မှာ ဆေးရုံးတွေ ၊ လမ်းတွေ ဈေးတွေ ၊ လေယာဉ်ကွင်းတွေ ၊ တံတားတွေ ဆောက်ပေးစရာ အကြောင်းမရှိဘူး ။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံး တိုးတတ်ဖို့ လုပ်နေတာ ။ တစ်ပြည်လုံးကို မကူညီချင်နေ ကချင်ပြည်နယ် တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်တောင် နည်းပညာဖွံဖြို့းတိုးတတ်အောင်လုပ်၊ အတန်းပညာသင် ၊ ကြိုးစား ပြီးရင် စက်ရုံတွေ ဆောက် ဒါဆိုရင် မင်းတို့ကို အစိုးရကတင် မဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာကပါ အသိမှတ်ပြုလိမ့်မယ်။ သေနတ်ပစ်တတ်ရုံ မိုင်းထောင်တတ်ရုံနဲ့တော့ မတိုးတက်ဘူး ။ အစိုးရဆိုတာလည်း ဗမာလူမျိုးပဲ အစိုးရဖြစ်ရမယ်လို့ မသတ်မှတ်ထားဘူး။ အားလုံးက လူမျိုးစွဲတွေ ဂိုဏ်စွဲတွေကို ဖျက်ပြီး ကြိုးစားရမယ် ။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတောင် ငါတို့လို့ လူမျိုးတူ မဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံပေါင်းစုံကတွေ ။ အေး လူမဲ အုပ်ချူပ်နေလို့ လူဖြူတွေ ဆန္ဒမပြဘူး ။ လူဖြူ အုပ်ချူပ်နေလို့လဲ လူမဲတွေ မယုတ်မာဘူး ။ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပဲ ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးပြီး တိုးတတ်နေတယ် ။
မြန်မာနိုင် ငံ ဟာနောင်နှစ်ပေါင်းတစ် ရာတိုင်အောင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းမှု တိုင်းပြည်တိုးတက်မှု ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စည်းလုံးမှုမရှိ လူမျိုးရေးအ ခြေခံမှု တွေကြောင့်ပေါ့။
comment ရေးတဲ့ကောင်တွေ မင်းတို့ကဒီတိုင်းပြည်က ပြည်သူတွေဆိုရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှန်သမျှ စစ် ရပ်စဲဖို့တောင်းဆိုရမှာ။comment ရေးပြီး ဆဲဆိုရန်ဖြစ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။စောက် ရူးတွေ။စစ်ကို အားပေးနေသလိုဖြစ်နေပြီ။
အေးကွာ စစ်ကိုလိုလားလွန်းလို့ စစ်တိုက်
ဖို့ ပြောနေတာမဟုတ်ဖူး ဘာကြောင့်